Indawo Yokudoba @ Outpost 61 -14ac. St. Francisville - I-Airbnb
Indawo Yokudoba @ Outpost 61 -14ac. St. Francisville
Saint Francisville, Louisiana, i-United States
Indlu encane ibungazwe ngu-Patrick
Itholakala kalula esifundeni esingokomlando i-St. Francisville, i-La, amakhaya ezitshalo, izindawo zomlando kanye ne-Tuncia WMA (izimpophoma ze-Clarks Creek), i-Cat Island NWR, izindawo zokudlela nezindawo zokuphumula, kodwa zibekwe kuma-acres angu-14 ezindawo zokhuni ezinechibi lokudoba.
Woza ujabulele ukuhlala ubusuku obuthule kwelinye lamakhaya ethu amabili amancane. Ikhaya lomuntu ngamunye lingu- sq sq. elinekhishi eliphelele, indlu yokugezela eneshawa, ikamelo lokulala elineloft yesibili, igumbi lokuphumula ne-porch yangaphambili. I-barbecue yesitayela sepaki yangasese kanye nomgodi womlilo ovamile.
Jabulela ukuhlala kwakho okukhethekile e-St. Francisville 's Fishing Lodge, ikhaya elisha elincane elihle elihlelwe emahlathini enyakatho yedolobha. Indlu encane ye-Fishing Lodge ihlotshiswe nge-motif yokudoba eneziqephu ezindala zokudoba, izimpawu, i-crab trap, njll... Jabulela umlilo wokukhempa emgodini womlilo ovamile noma ujabulele i-barbecue emgodini wesitayela sepaki.
Izitebhisi eziya endaweni ye-loft zithuthuka kancane. Ukuphakama kophahla ku-loft kunobude obungamamitha angu-4 kuphela. Indawo enkulu yokulala futhi elungele izingane.
Indlu yethu ihlotshiswe ngamapulangwe nxazonke ngepulazi elikhulu eline-acreage eya enyakatho. Indawo yokungena etholakala e-US Hwy 61, eyenza kube lula ukufinyelela izindawo eziseduze kuhlanganise nesifunda sedolobha i-St. Francisville, La., amamayela angu-1 1/2 ukuya e-Afton Villa Gardens, amamayela angu-2 ukuya e-Catalpa ne-Cottage Plantation. Cishe imizuzu engu-15-20 ukuya e-Tunica Falls (e-Clarks Creek WMA) noma e-Cat Island National Wildlife Refugees.
Abafowabo ababili nodadewethu oyedwa bahlala egcekeni futhi bayatholakala ukuphendula imibuzo yakho. Umnikazi, u-Patrick, ungumnikazi wangaphambilini we-St. Francisville Inn cishe iminyaka engu-30 futhi unolwazi ngendawo.
Hlola ezinye izinketho ezise- Saint Francisville namaphethelo